Antoine Griezmann oo ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa Faransiiska sanadka 2016 – Gool FM
Antoine Griezmann oo ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa Faransiiska sanadka 2016
Haaruun December 19, 2016
(Madrid) 20 Dis 2016 – Weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Atlético de Madrid iyo xulka qaranka Faransiiska ee Antoine Griezmann ayaa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa Faransiiska sanadka 2016 ‘Best French footballer of 2016’, waxaana abaal-marintaasi bixisay jariiradda France Football magazine.
Griezmann oo 25 sano jir ah ayaa helay codadkii ugu badnaa ee lagu bixinayey abaal-marintan la magac baxday Joueur Français de l’année 2016, waxaana abaal-marintan haystay oo sanadkii hore ku guuleystay ciyaaryahanka kooxda Paris Saint-Germain ee Blaise Matuidi.
Waxa uu abaal-marintan Griezmann ku garaacay rag caan ah sida xiddiga ugu qaalisan kubadda cagta ee u safta kooxda Manchester United Paul Pogba iyo dhaliyaha kooxda Real Madrid ee Karim Benzema.
Inuu abaal-marintan ku guuleysto Griezmann waxyaabaha u suuro galiyey waxaa ka mid ah, isagoo noqday laacibkii ugu fiicnaa tartankii qarammada Yurub 2016 ee laga qaaday dalkiisa Faransiiska, inuu kooxdiisa Atleico Madrid keenay kama dambaysta tartanka Champions League iyo isagoo sidoo kale ka mid noqday xiddigaha ugu fiicnaa La Ligaha Spain.
Abaal-marintan ragga horay ugu guuleystay waxaa ka mid ah Michel Platini, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Franck Ribéry iyo Karim Benzema.
Kooxdii u baahan kaalinta koowaad ee Premier League sow Kanté ha qaadato maaha?!
EPL: Kooxda Liverpool oo ku soo laabatay kaalinta labaad ee horyaalka, kaddib guul ay waqtigii dhimashada ka gaartay Everton… + SAWIRRO